FISAORANA – MyDago.com aime Madagascar
Ny Ankolafy Ravalomanana dia manolotra ny fankasitrahana amam-pisaorana ho an’ ny Vahoaka rehetra, na avy eto Antananarivo na avy any amin’ ny faritany, izay tonga nitsena ny Filoha Ravalomanana Marc, teny Ivato tamin’ ny sabotsy faha 21 janoary teo. Ho an’ ireo Mpiray tanindrazana izay niombom-po amam-bavaka koa, na dia tsy afa-nankeny an-toerana aza.
Mirary fiononana ho an’ ny fianakavian’ ny namoy aina tamin’ iny fifanotronana iny koa ny Ankolafy. Enga anie ho fahasoavana ombam-panambinana no hamerina indray ny fifaliana notapahin’ izao fahoriana izao. Mirary koa raha mirary fahasitranana malaky ho an’ ireo naratra, tamin’ iny fifanotronana iny.
Ary manoloana ny toe-draharaha iainan’ ny firenena Malagasy, taorian’ ny tranga tamin’ ny sabotsy teo, dia mankahery ny Vahoaka hatrany ny Ankolafy Ravalomanana, mba tsy hikely soroka fa hiatrika sahady indray ny fitsenana an’ ilay Mahery fontsika, izay tsy maintsy tafaverina an-Tanindrazana tsy ho ela. Antoka mahatanteraka izany ny firaisan-kinantsika, ny finoana aman-pihavanana.
Ny ankolafy Ravalomanana
Auteur Solo Razafy*Publié le 26 janvier 2012 Catégories Politique
12 pensées sur “FISAORANA”
Hasio fahatsiarovana ireo namoy ny ainy tamin’ny ALATSINAINY MAIZINA 26janoary 2009.Maro ny kilan’ny afo namoy ny ainy, tsy mpangalatra ihany no may kilan’ny afo tao fa ny mpivarotra niaro ny fanany sy ny mpiasa ihany koa. Ary indrindra ireo izay very fananana tsy tafarina intsony. Aoka isika hanaja ny andro androany, miondrika am-panajana, fa maro ny malagasy no tsy manana hohanina intsony noho ny ALATSIANINY MAIZINA. Hamorina AV26 indray!
Marina izany ry Sotoavo!Isika mantsy toa henjehin’ny andro ho lava fotsiny,
ka manadino2,tsy mahatsiaro ny ririnin-dasa.
Aoka mba ho hisy fahatsiarovana na dia tsiahy kely 1 minitra monja aza raha sanatria ka tsy nisy mba
Dia mahatoky ny fahendren’ny tsirairay tompoko !!Aoka tsy hisy ho very ho raraka an-tany fotsiny na dia
RANOMASO INDRAY MITETE aza koa maika fa AINA OLONA IZAO??????
POUR CE PROCHAIN RETOUR DU PRESIDENT RAVALOMANANA,
AFIN DE NE PAS DÉCOURAGER LE PEUPLE DE VENIR NOMBREUX A IVATO, UNE CONDITION FERME ET STRICTE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE ET ENVOYÉE OFFICIELLEMENT AU DIRIGEANT FRANÇAIS :
UN SEUL MALAGASY BLESSE = TOUS LES EXPATRIES FRANÇAIS SERAIENT ASSASSINES !
FAUT ARRÊTER DE SUBIR ÉTERNELLEMENT !!!!!!!
Mba asio vidéo ny discours sy ny interviews raha azo atao fa ilainay mihintsy ireny ary io site io no mahazatra sy tianay anarahana ny vaovao indrindra ny eny Magro
Dia isaoranay be dia be iaanareo rehetra mpanao gazety sy ny teknisiana
ny zavatra angatahana any mouvance RAVALO dia tsy miditra ao aminio gouvernemanta io ra tsy tonga eo TANA RAVALO satria efa miteny hafa sahady ny VENDRANA mianakavy tsy mila amnistie RAVALO
26 janvier 2012 à 17 h 20 min
Misaotra ny firenena (avy amin’ny teny hoe:reny na mama) nanome vahoaka marobe tonga saina toy ireo amin’ny sary ireo.
Tsy misy fisaorana fa tsy ny ho fitsenana ny dadanareo am-pifaliana akory no nahatongavanay vahoaka teny fa saika hampatsiahy azy fa manana trosa sy rà nalatsaka i Ravalo!!!
vahoaka!Dia andoa 200.000 fmg aller fotsiny amin’ny taxi-brousse ve hampatsiahy an’izay.Ny retour mbola manginy fotsiny.Ilay analyse e!ankoatran’ny 10 km hatao handianana eny.
Ampahatsiahivo an’i Rabe fa ny sportif de haut niveau dia manome laza an’i USA dia statut hafa ny hahafahany mipetraka ao fa ny hommes politiques tsy misy laza ho entiny noho izany ohatran’ny vahiny rehetra statut-ny.
26 janvier 2012 à 20 h 13 min
Bemafohy!jereo http://www.clipfisch.de DSDS casting 2012 dia ny akama rehetra koa.
Saika hadinoko » Eleonore Diez « ,mba mahafinaritra ahy ilay izy dia zaraiko.
26 janvier 2012 à 20 h 45 min
Noheveriko hoe ranavalona, dia saika hiteny aho hoe : « Sehr schön ist die damoazel » !
26 janvier 2012 à 21 h 00 min
Précédent Article précédent : Misy mersenera ampiasain’ny heri-pamoretana
Suivant Article suivant : Tsy mila amnistia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana